အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ အလုပ်အကိုင် ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး Letter of Intent လက်မှတ်ရေးထိုး ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
နေပြည်တော် ဇွန်လ ၂၀ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး HE. Mr. Peter Lysholt Hansen နှင့် ယနေ့ ဇွန်လ ၂၀ ရက်နေ့ ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးညွန့်ဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစနစ် မြှင့်တင်ရေးအပေါ် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေး စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအလုပ်အကိုင် ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ထပ်မံသက်တမ်းတိုး လက်မှတ်ရေးထိုးရေး နှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်ရုံ နှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ အလုပ်အကိုင်ဝန်ကြီးဌာန တို့အကြား မြန်မာနိုင်ငံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစနစ် မြှင့်တင်ရေး အပေါ်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးစွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ အလုပ်အကိုင်ဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ၃ နှစ် တာကာလ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးစတင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်၍ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပြီးချိန်တွင် ပေါ်ပေါက်လာမည့် အကျုံးဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍအသစ်များ အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုစွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက်ပေးရေး လိုအပ်ချက်အား ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၄ နှစ်တာ ကာလ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ ထပ်မံသက်တမ်းတိုး လက်မှတ်ရေးထိုးရေး ကနဦးဆောင်ရွက်ချက် အဖြစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်မှု သဘောတူညီချက် (Letter of Intent) လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး HE. Mr. Peter Lysholt Hansenနှင့် ဦးစီးဌာနများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်မှုသဘောတူညီချက် (Letter of Intent) ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဒိန်းမတ်သံအမတ်ကြီး HE. Mr. Peter Lysholt Hansen နှင့် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးညွန့်ဝင်း တို့ကအသီးသီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး ပြီးပါက အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ဒိန်းမတ် လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်အာဏာပိုင်အဖွဲ့၊ ကျွမ်းကျင်သူများက စာတွေ့လက်တွေ့ လာရောက် လေ့ကျင့်သင်ကြား သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။